Xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegayaa Xuduuda u dhexaysa labada Dal ee Eritrea iyo Itoobiya | maakhir.com
Xiisad colaadeed ayaa laga soo sheegayaa Xuduuda u dhexaysa labada Dal ee Eritrea iyo Itoobiya
Adisababa:- Xiisad colaadeed tii igu darayd ayaa laga soo tabinayaa xuduuda u dhexasya labada Dal ee Itoobiya iyo Eritrea kuwaasi oo la sheegay inay wadaan Abaabul dagaal oo xoogan, dhanka Itoobiya ayaa waxa laga soo tabinayaa inay wadaan daad guraynta Ciidamo kuwaasi oo Kumanaan Ciidamadeeda ah u soo daad gureeyay xuduuda labadaasi Dalk u dhexaysa.
Xiisad colaadeed ayaa lagu soo waramaa inay ka oogan xuduuda u dhaxaysa wadamada Itoobiya iyo Eritrea, kuwaasi oo midba mid ku eedaynayo inay hurinayaan Xiisad colaadeed taasi oo ka dhex qaraxda labadaasi Dal.
Jariirad ka soo baxada Dalka India oo lagu magcaabo Inidia Ocean Newsletter ayaa sheegtay in Baarlamaanka Dalka Itoobiya ay miisaaniyada sandanka 2008-ay kordhiyeen kuwaasi oo la sheegay in laga dhigay 54-Millon oo Dooralka Maraynka ah, taasina waxay muujinaysaa sida Dawlada Itoobiya ay uga go”an tahay inay dagaal buuxa la gasho Dawlada Eritrea.
Dhanka kale Ciidamada India ee ka socda Q.M kuwaasi oo sugan Xuduuda labadaasi Dal ayaa sheegay inay maqleen dhawaaqa rasaasta oo ay is waydaarsadeen ciidamada kala taageersan Dawlada Itoobiya iyo Eritrea, walaw aan wax khasaaraha goobtaasi laga soo tabin.
Xiisadan ayaa ku soo beegmaysa xili ay Q.M ku cel celinayso inaan wax dagaal ahi dhex marin labadaasi Dawladood kuwaasi oo dhawor jeer u soo diray gudi xaqiiqa raadis ah.
« Afduubayaashii Shaqaalaha M.S.F oo dalbaday Aduun Lacag ah oo Madax furasho ah
Mwikibaki oo ku guulaystay Madaxtinimada Dalka Kenya »